Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo siyaabo kala duwan uga hadlay Dacwadda Badda – Somali Top News
November 14, 2019 Somali Top News	0 Comments Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya oo siyaabo kala duwan uga hadlay Dacwadda Badda
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta guriga uu ka dagan yahay Nairobi kulan dheer kula yeeshay dhiggiisa dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo muddo khilaaf dheer kawada dhaxeeyay.
Kulanka kadib Labada Madaxweyne oo si wadajir ah shir jaraa’id u wada qabtay ayaa ka hadlay arrimaha Amniga, xiriirka labada dal, ganacsiga iyo dacwadda Badda , Labada Madaxweyne ayaa isla qaatay in la fududeeyo isu-socdaalka labada shacab, dibna loo soo celiyo dulimaadyada tooska ah ee Nayroobi iyo Muqdisho, iyadoo masuuliyiinta iyo shaqaalaha rayidka ah ee Dowladda ay dal-ku-galka Kenya ka qadaanayaan goormada diyaaradaha ee dalkaas.
Arrinta dacwadda Badda ee ICJ taala madaxweyne Farmaajo oo uga hadlay qeybihii ugu dambeeyay khudbadiisa shir saxaafadeedka Labada madaxweyne wuxuu sheegay in kiiska Badda ee ICJ yaalla uusan saammayn ku yeelan xiriirka labada dal.
Balse Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya Monica Juma ayaa sheegtay in Madaxweyne Farmaajo uu muujiyay kalsoonidiisa ah in arrinta ICJ lagu xallin doono qaab labada dhinac oo wada oggol ah.
Sidoo kale page-ka rasmiga ah ee madaxtooyada Kenya ayaa lagu yiri” Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu muujiyay kalsoonida uu ku qabo in dacwadda badda ee labada dal ee ICJ in lagu xaliyo qaab la isla ogolyahay ka hor maxkamadda cadaaladda aduunka ee Hugue”
Waxaa muuqata in sida Kenya ay rabto wax u socdaan ka soo bilow dalabkeeda is xig xiga ee dib u dhigista maxkamadda ICJ ee Kenya iyo kulanka labada Madaxweyne oo dhacay inkabadan Afar jeer tan iyo markii khilaafka labada dal uu si toos ah u soo shaac baxay.
Madxweyne Farmaajo oo shalay la hadlayay qaar kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee Kenya ayaa sheegay in Dowladaha dariska ah hadii ay kuu arkaan inaad neceb tahay ama aadan la shaqeyneyn iney kuusoo dhaxmarayaan maamul-Goboleedyada,Xildhibaanada, siyaasyiinta ama dowladda dhaxdeeda.
← Akhriso: Heshiisyada ay kala saxiixdeen madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru kenyatta
Somalia and Kenya restore relations; agree on direct flights and visas →
Xog: Mukhtaar Rooboow oo doorashada Koofur Galbeed isaga haraya
Rag katirsan Al shabaab oo xukun dil ah lagu fuliyay maanta